Héctor Bellerín oo ka hadlay guuldarradii Arsenal xalay ka soo gaartay kooxda Brighton & Hove Albion – Gool FM
(London) 06 Dis 2019. Daafaca garabka midig ee kooxda Arsenal Héctor Bellerín ayaa niyadjab weyn ku tilmaamay guuldarradii lama filaanka aheyd ay xalay kala kulmeen naadiga Brighton & Hove Albion.
Arsenal ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Brighton & Hove Albion oo marti ugu aheyd Emirates Stadium, kaddib markii loogu awood sheegtay 1-2, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 15-aad ee horyaalka Premier League.
Héctor Bellerín ayaa wareysi uu bixiyay kaddib markii ay ciyaarta dhamaatay wuxuu ku sheegay:
“Ma aqaano waxa aan sheego, waxaan dareemayaa in wax walba ee aan sameyno aysan ku socon doonin wadada saxda ah”.
“Kooxda waxay sameysay wax walba ay awoodo, waxaan abuurnay fursado, waxaan u difaacanay si fiican, laakiin arrinta waxay u muuqataa inaan u baahanahay fursado dheeri ah oo aan goolal ku dhalin karno”.
“Kooxaha naga soo horjeeda waxay naga dhaliyaan fursad walba, ma heli karo ereyo aan ku muujiyo arrintaas”.
“Ciyaartoy kasta oo kooxda katirsan wuxuu bixiyay 100% ee dadaalkiisa ah, markii aan soo galnay gudaha garoonka waxaan dooneynay inaan badino, isla markaana aan sameyno sida ugu wanaagsan”.
“100% waxaan kalsooni ku qabaa in natiijooyin wanaagsan ay imaan doonaan, kubadda cagta waa sida nolosha oo kale, waa inaad ka gudubtaa caqabadaheeda”.
“Waxaan halkan ku qaaday koobab badan, waxaan ku qaatay xilli ciyaareedyo fiican iyo kuwo xunba, Freddie Ljungberg wax badan ayuu ka caawiyay kooxda Isbuucan, awood badana waa uu siiyay”.